Weeraro Khasaara Dhaliyay Oo Ka Dhacay Gobollada Jubbada Hoose iyo Sh/Hoose.
Wednesday October 10, 2018 - 11:12:20 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka k imaanaya Koonfurta dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in xoogaga Al Shabaab ay weeraro safballaaran ah ku qaadeen saldhigyo melleteri oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda iyo kuwa Ururka Midowga Afrika.
Xalay saqdii dhexe ayay xoogaga Al Shabaab weeraro ku mireen saldhigyada ciidamada AMISOM iyo maleeshiyaadka dowladda Federaalka ay ku leeyihiin degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya in ciidamada Al Shabaab ay gudaha ugaleen Qoryooleey kadib markii ay ka itaal roonaadeen maleeshiyaadkii dowladda, saacado dagaallo socdeen kadib ayay ugudbeen dhanka saldhigga ciidamada Uganda ee kuyaal agagaarka Buundada Qoryooleey halkaas oo markale laysku fara saaray.
Dhinaca kale warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya iska hor'imaadyo iyo qaraxyo shalay ka dhacay deegaanka Baar Sanguuni ee duleedka magaalada Kismaayo, ilo wareedyo ayaa sheegaya in 5 askari ay ku dhinteen weerar Jidgal ah oo ciidamada Al Shabaab ay udhigeen maleeshiyaadka maamulka Jubbaland.
Dhanka deegaanka Shalaambood ee duleedka magaalada Marka qarax xooggan ayaa xalay lagula beegsaday ciidamo katirsan dowladda Federaalka balse lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay.